AI မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုအပူချိန်အနီအောက်ရောင်ခြည် Thermal Scanner Camera Access Control Machine နှင့်ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်စက်ရုံ - Mapesen
နေအိမ် > > အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူစကင်နာ > AI မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုအပူချိန်အနီအောက်ရောင်ခြည် Thermal Scanner Camera Access Control Machine
Mapesen supply AI မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုအပူချိန်အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူစကင်နာကင်မရာအသုံးပြုခွင့်ထိန်းချုပ်စက်သည်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာသည့်အဖျားမျက်နှာပြင်စစ်ဆေးခြင်းမျက်နှာပြင်စစ်ဆေးခြင်းမျက်နှာပြင်၊ CE FCC RHOS သည် ၃ နှစ်အာမခံချက်။ CCTV ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အရည်အသွေး၊ ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းဖြင့် ၈ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသောကျွန်ုပ်တို့တွင်အမှတ်တံဆိပ်အေးဂျင့်များနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ OEM မိတ်ဖက်များရှိသည်။
၁။ AI မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုအပူချိန်အနီအောက်ရောင်ခြည် အပူ Scanner Camera Access Control Machine
Mapesen AI မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုအပူချိန်အနီအောက်ရောင်ခြည် အပူ Scanner ကင်မရာ Access Control Machine မျက်နှာဖုံးအသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ အဆက်အသွယ်မဟုတ်သောခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်း၊ မျက်နှာဖုံး ၀ တ်ဆင်ခြင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း၊ မြင့်မားသောအပူချိန်နှိုးစက်များနှင့်မျက်နှာပြင်အချက်အလက်များနှင့် 100000pcs တက်ရောက်သူမှတ်တမ်းများကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ acess ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ၀ န်ထမ်းများအား ၀ င်ရောက်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှု၊ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ ပိုမိုအာမခံချက်ကိုယခုအခြေအနေမျိုးတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုလာစေသည်။ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် CE, RHoS လက်မှတ်နှင့် ၁၀၀% အာမခံချက်ရှိသူများ။
2. AI မျက်နှာ၏အသိအမှတ်ပြုမှုအပူချိန်အနီအောက်ရောင်ခြည် အပူ Scanner Camera Access Control Machine ၏ကုန်ပစ္စည်း Parameter
3. Product Feature And Application ofအာအိုင် Face Recognition အပူချိန် infrared အပူ Scanner Camera Access Control Machine
- Face Recognition အပူချိန် Measurement in Seconds
မြင့်မားသောတိကျသောအပူအာရုံခံကိရိယာကို အသုံးပြု၍ အဆက်အသွယ်မရှိသောအလိုအလျောက်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ပိုမိုထိရောက်မှုရှိခြင်း။
ပံ့ပိုးမှု max 50000pcs human faces database for recognition,100000pcs data recording.
မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုကို±± 0.3 measuring၊ တိုင်းတာမှုအမှားနည်းပြီးတည်ငြိမ်သည်။
စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းရှာဖွေတွေ့ရှိသောမျက်နှာဖုံးတပ်ဆင်ထားသည့်စက်သည်အထူးအချိန်တွင်မျက်နှာဖုံးကို ၀ တ်ဆင်ရန်လူတို့အားသတိပေးသည်။
မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုသည်ဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ အလိုအလျောက်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုထားသောကြိုတင်ထုတ်ဝြေခင်း (သို့) ထွက်ခွာခြင်း၊ တက်ရောက်သူအချက်အလက်မှတ်တမ်းများ၊
- Real-time ရလဒ်
Access Control System မျိုးစုံနှင့်လိုက်ဖက်သည်။
၎င်းသည်လူများ၏ ၀ င်ထွက်ခြင်းနှင့်ထွက်ခွာခြင်း၏ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုထိထိရောက်ရောက်ထောက်လှမ်းနိုင်ပြီးရောဂါကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ရန်အထောက်အကူပြုသည်။ လူအများအပြားရှိသောအများပြည်သူနေရာများအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်၊ လက်ဖြင့်အလုပ်ထက်ခက်ခဲသောစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ကျောင်းများ၊ လူနေအိမ်ရာနေရာများ၊ စူပါမားကက်များ၊ စက်ရုံများနှင့်အခြားနေရာများအတွက်သင့်တော်သည်။
5. Product Qualification ofအာအိုင် Face Recognition အပူချိန် infrared အပူ Scanner Camera Access Control Machine
Over 8 years’ experience in manufacturing CCTV products,Mapesen are with strictly quality control system to ensure every delivered products performing well and passed ISO9001. For all production,our QC and IQC department will inspect and control all of the procedures from the income materials to the finish products,and ensure 100% aging until the quality is meeting the requirement.Ourအာအိုင် Face Recognition အပူချိန် အပူ Camera Access Control Machine is all CE,FCC,RHoS qualified,and obtained high praise from customers.
ဟုတ်တယ်၊ ကွန်ပျူတာ client ရဲ့ menu ထဲက Centi-grade ကို Fahrenheit ဒီဂရီပြောင်းလို့ရတယ်။
hot Tags:: AI မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုအပူချိန်အနီအောက်ရောင်ခြည် Thermal Scanner Camera Access Control Machine, ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူ၊ စက်ရုံ, တရုတ်, လက်ကားရောင်း၊ ဝယ်၊ စိတ်ကြိုက်၊